Kungani Ukuqondiswa Komongo Kubaluleke Kakhulu Kubathengisi Abazulazula Ngekusasa Elingamakhukhi | Martech Zone
Siphila ekushintsheni kwepharadigm yomhlaba jikelele, lapho ukukhathazeka kwangasese, kuhambisana nokufa kwekhukhi, kufaka ingcindezi kubakhangisi ukuthi bahambise imikhankaso eyenziwe ngezifiso futhi enozwela, ezindaweni eziphephe sha. Yize lokhu kuveza izinselelo eziningi, kuphinde futhi kuveze amathuba amaningi kubakhangisi ukuvula izindlela eziqonde kakhulu zokukhomba kokuqukethwe.
Ukulungiselela Ikusasa Elincane Le-Cookie
Umthengi okhula ngokuya ngasese manje usenqaba ikhukhi lomuntu wesithathu, ngombiko ka-2018 odalula amakhukhi angama-64% enqatshiwe, kungaba ngesandla noma ngesivimbeli sesikhangiso - futhi lokhu kwakungaphambi kokuba kusetshenziswe umthetho omusha wobumfihlo. Ngaphezu kwalokhu, amafoni angama-46% manje enqaba cishe ama-79% wamakhukhi, futhi amamethrikhi asuselwa kukhukhi ahlala efinyelela ngokweqile ngama-30-70%.
Ngo-2022, iGoogle izokhipha ikhukhi lomuntu wesithathu, okuthile iFirefox neSafari asebekwenzile. Unikezwe ama-akhawunti we-Chrome we- ngaphezu kwe-60% yokusetshenziswa kwesiphequluli sewebhu, lokhu kuyinto enkulu kubakhangisi nabakhangisi, ikakhulukazi labo abasebenzisa uhlelo. Lezi ziphequluli zisazovumela amakhukhi eqembu lokuqala - okungenani okwamanje - kepha okucacile ukuthi ikhukhi ngeke lisathenjelwa kulo kakhulu ukwazisa ukuqondiswa kokuziphatha.
Kuyini Ukuqondiswa Komongo?
Ukuqondiswa kokuqukethwe kuyindlela yokukhomba izethameli ezifanele usebenzisa amagama angukhiye nezihloko ezitholakala kokuqukethwe okusungulwe kuhlu lwezikhangiso, ezingadingi ikhukhi noma esinye isikhombi.
Ukuqondiswa Komongo Kusebenza Ngendlela elandelayo
Okuqukethwe okuzungezile yokusungula izikhangiso ekhasini lewebhu, noma empeleni izinhlaka nezindikimba ezikhona kuvidiyo, kukhishwa kudluliselwe enjinini yolwazi.
Injini isebenzisa algorithm ukuhlola okuqukethwe kususelwa ezinsikeni ezintathu, 'ukuphepha, ukufaneleka nokufaneleka' kanye nomongo lapho kukhiqizwa khona.
Izixazululo ezithuthuke kakhulu zingabeka ungqimba kokungeziwe idatha yesikhathi sangempela ihlobene nomongo wombukeli okwamanje isikhangiso siyabukwa futhi sihlukaniswe kahle, njengokuthi isimo sezulu siyashisa noma siyabanda, kusemini noma kusebusuku, noma uma kuyisikhathi sasemini.
Ngaphezu kwalokho, esikhundleni samasignali asuselwa kukhukhi, isebenzisa esinye isikhathi sangempela amasiginali asuselwa kokuqukethwe, njengokuthi umuntu useduze kangakanani nehaba, ingabe usekhaya, noma uyahamba, njll.
Uma ukufaneleka amaphuzu idlula umkhawulo wamakhasimende, iDemand Side Platform (DSP) iyaziswa ukuthi iqhubeke nokuthenga kwabezindaba.
Ukuqondiswa okuthuthukile kokuqukethwe kuhlaziya umbhalo, umsindo, ividiyo, nezithombe ukudala izingxenye eziqondiswe kokuqukethwe ezifaniswa nezidingo ezithile zomkhangisi, ukuze ukukhangisa kuvele endaweni efanele futhi efanelekile. Isibonelo, i-athikili yezindaba emayelana ne-Australian Open ingakhombisa uSerena Williams egqoke izicathulo zethenisi zikazakwabo kaNike, bese isikhangiso sezicathulo zezemidlalo singavela ngaphakathi kwendawo efanelekile. Kulesi simo, imvelo iyahambisana nomkhiqizo.
Kusebenza Ngokuphumelelayo Kunokusebenzisa Amakhukhi Eqembu Lesithathu?
Ukuqondiswa kokuqukethwe kukhonjisiwe ukuthi kusebenza kangcono kunokukhomba kusetshenziswa amakhukhi wenkampani yangaphandle. Eqinisweni, ezinye izifundo ziphakamisa ukuthi ukuqondiswa kokuqukethwe kungakwenza khulisa inhloso yokuthenga ngo-63%, kuqhathaniswa nezithameli noma ukuqondiswa kwezinga lesiteshi.
Izifundo ezifanayo zitholakele Ama-73% wabathengi bazizwa izikhangiso ezihambelana nomongo kugcwalise okuqukethwe okuphelele noma isipiliyoni sevidiyo. Futhi, abathengi ababhekiswe ezingeni lokuqukethwe babekhona Ama-83% amathuba okuncoma umkhiqizo esikhangisweni, kunalezo eziqondiswe kuzethameli noma ezingeni lesiteshi.
Ukuthandwa ngokuphelele komkhiqizo kwakungu Ama-40% aphezulu kubathengi okubhekiswe ezingeni lokuqukethwe, futhi abathengi bakhonze izikhangiso ezingokomongo babika ukuthi bazokhokhela ngaphezulu umkhiqizo. Ekugcineni, izikhangiso ezinokubaluleka kokuqukethwe okuvelile Ukuzibandakanya okungaphezulu kwama-43% ngaphezulu.
Funda kabanzi ngokukhonjwa kokuqukethwe ephepheni lethu lakamuva elimhlophe:
Landa i-Contextual Targeting Whitepaper
Tags: amakhukhi we-chromeukukhangisa okuqukethweukumaketha kwezimoukuqondiswa komongokunciphe amakhukhiamakhukhiamakhukhi we-firefoxamakhukhi we-safari